အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃ -၂၀၂၂) အကြောင်းတစေ့တစောင်း – Yaung Chit Thit
ပင်မစာမျက်နှာ / အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃ -၂၀၂၂) အကြောင်းတစေ့တစောင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေအပြည့်အဝရရှိပြီး သူတို့တွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာစေရန်နဲ့ ကျား/မရေးရာတန်းတူညီမျှရေး၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို အသိအမှတ်ပြု
နားလည်လက်ခံနိုင်စေမယ့်စနစ်တွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် ဆယ်နှစ်တာကာလရှိတဲ့ မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ရေးဆွဲအတည် ပြုထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကတော့ “အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသား အဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း” (NSPAW – National Strategic Plan for the Advancement of Women) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို မြန်မာနိ်ုင်ငံက၁၉၉၇ခုနှစ်၊ ဇူလိ်ုင်လမှာလက်မှတ် ရေးထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးများအားနည်းမျိုးစုံဖြင့်ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုပပျောက်ရေးသဘောတူစာချုပ်(စီဒေါ)၊ ဘေဂျင်းလုပ်ငန်းစီမံ ချက်၊ ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ စတဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေ၊ ဥပဒေတွေ၊ စံနှုန်းတွေအရ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့်လုပ် ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအပေါ်အခြေခံကာ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (၁၂) ရပ်ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
၁. အမျိုးသမီးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု
၂. အမျိုးသမီးများနှင့် ပညာရေး၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး
၃. အမျိုးသမီးများနှင့် ကျန်းမာရေး
၅. အမျိုးသမီးများနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများ
၆. အမျိုးသမီးများနှင့် စီးပွားရေး
၈. အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းယန္တရားများ
၉. အမျိုးသမီးများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး
၁၀. အမျိုးသမီးများနှင့် မီဒီယာ
၁၁. အမျိုးသမီးများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရာမှာ သုတေသနပြုခြင်း(သို့မဟုတ်) စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် မူဝါဒချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ်လို့ စီမံကိန်းစာအုပ်မှာရှင်းလင်းဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း တွေက နိုင်ငံရေးအသိရှိရှိဖြင့် လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကို ဝိုင်းဝန်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီ အကောင် အထည်ဖေါ်ခြင်းဖြင့်တို့ဖြင့် ကတိကဝတ်ပြုလျှင် အောင်မြင်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့ဆို ထားပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှာ မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ် ဖို့နဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွေမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီကို အရင်ကသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးဌာန တွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပေမယ့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်လည်ဖွဲ့စည်းရာမှာတော့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းခြောက်ဖွဲ့ကိုတရားဝင်ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ကိုထည့်သွင်း ပါဝင်စေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့သလို ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းစာအုပ်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရင် အောင်မြင်တဲ့စီမံကိန်း ဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ တကယ်ကောဒီလိုဖြစ်နေပြီလားလို့ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမဟာဗျု ဟာစီမံကိန်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ ပြည်တွင်းအရပ်ဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ကြတာတွေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့နဲ့အတူဆွေးနွေး ကာသဘောတူအတည်ပြုထားကြတာဖြစ်ပေမယ့်ငါးနှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်အထိ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်း ရှိမှန်းတောင်မသိသေးတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိသူတွေရှိသလို၊ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းတည်ရှိနေမှုကို မသိတဲ့ အမျိုးသမီးအထုအမြောက်အမြားရှိနေသေးတာကတော့အမှန်ပါဘဲ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေ လို့ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖေါ်မှုကောမရှိဘူးလားမေးစရာရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဲ့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသက်ဆိုင်ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ဆောင်ကြတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ကျွမ်းကျင်မှုဧရိယာအလိုက် သီးခြားစီဆောင်ရွက်နေကြတာကိုဘဲတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိမှုအကန့်အသတ်တွေရှိသလို၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအင်အားအရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်နဲ့လုပ်ဆောင်နေ ကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလျော့ကျသွားစေဖို့ နဲ့ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းပါလုပ်ငန်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖေါ်နိ်ုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အလှုရှင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖိတ်ကြားပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းလူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသမီးဌာနခွဲက အခြားဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကို သွားရောက်ပြီး မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်မှုအခြေအနေနဲ့ ဆက်လက်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားရန်အရေးကြီးပုံတွေကိုရှင်းပြဆွေးနွေးမှုများရှိသလို၊ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကိုဘယ်သူတွေက ဘယ်နေ ရာမှာ ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖေါ်နေလည်းဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာတွေကို သွားရောက်ကာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်အပြီးမှာ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကိုထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတ ကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အလှုရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကော်မတီဟာမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည် ဖေါ်ရ မှာ နည်းပညာအကြံပေးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကို လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့အတွက် စီမံကိန်းနယ်ပယ် ၁၂ ရပ်အနက်က အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့နယ်ပယ် ၄ ရပ်ကို စီမံကိန်းသက်တမ်းကျန်တဲ့ ငါးနှစ်အ တွင်းမှာဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖေါ်သွားရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁။ အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး (Women participation in politics and economic)
၂။ အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး (Women Peace and Security)
၃။ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်ရွယ်များအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု (Violence Against Women and Girls)
၄။ ကျား/မရေးရာသဘောတရားကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နည်းပညာ၊ လူမှုအကာအကွယ်ပြုရေးကဏ္ဍ တွေမှာ ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ခြင်း (Gender Mainstreaming in Education, Health, ICT and Social Protection)
အထက်ကဖေါ်ပြတဲ့ နယ်ပယ် ၄ ရပ်အတွက် နည်းပညာတွေအကြံပေးနိုင်ဖို့ ကဏ္ဍတစ်ခုစီအလိုက် နည်း ပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်မတီဝင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာ အကြံပေးအဖွဲ့တွေရဲ့သဘာပတိနဲ့တွဲဖက်သဘာပတိတွေကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်း ကော်မတီဝင်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျား/မရေးရာတန်းတူ ညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီး များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာညှိနှိုင်း ရေးအဖွဲ့ (GEWE CG – Gender Equality and Women Empowerment Coordination Group) ဆိုတာလည်းရှိနေသေးတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကဘာလုပ်ရမှာလည်း ဆိုတော့ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်း ကော်မတီကိုနည်းပညာအကူအညီသာမက၊ ငွေကြေးအကူအညီများပါညှိနှိုင်းစေ့စပ်ပံ့ပိုးပေးသွားရမှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရာမှာ မူဝါဒရေးရာနဲ့ နည်းပညာအကြံပေးခြင်း တွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ယန္တရားကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်ဖို့ အောက်မှာ ဇယားနဲ့ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ (ဇယားက ဒီနေရာမှာ ထည့်သ ွင်းဖေါ်ပြလို့မရဖြစ်နေတဲ့ အ တွက် ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။)
ဒီကော်မတီတွေ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီတွေမှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်နေကြလဲဆိုတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ လူမှု ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီး ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီးတော့၊ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အ စည်း ၇ ဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ရဲ့သဘာပတိ နှင့် တွဲဖက် သဘာပတိတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ မူဝါရေးရာချမှတ်ပေးမယ့်ကော်မတီရှိသလို၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်နဲ့ အောက်ခြေအဆင့်တွေမှာလည်းဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖေါ်မယ့်ယန္တရားရှိပါသေးတယ်။ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီးတွေဟာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အမျိုးသမီးကော်မတီမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြပြီး၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မှာတော့ ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အမျိုးသမီး ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဌများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အမျိုးသမီးကော်မတီကိုလည်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာလို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါဝင်စေပြီးဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူဘဲ မြို့နယ်အဆင့်ထိပါဖွဲ့စည်းပြီး မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းနယ်ပယ်ထဲက ဦးစားပေးနယ်ပယ် ၄ ရပ်ကို ချမှတ်ပေးထားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ အညီအကောင်အထည်ဖေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်မှုဆိုင်ရာ ကော်မတီတွေ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ၊ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေမှုတွေ ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် အများကြီးရှင်းပြစရာ ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီကော်မတီတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နေမှုပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်နေမှုတို့ ကိုဆက်လက်မ ရှင်းပြတော့ဘဲ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကြီး တကယ်ကို သက်ဝင်စွာနဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရေးကိုသာ အလေးပေးတိုက်တွန်းပြောချင်ပါတယ်။ နောက်နောင်များအခွင့်အခါသင့်ရင်တော့ ကော်မတီတွေရဲ့လုပ် ဆောင်မှုပုံစံတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါဦးမယ်။
တကယ်တော့ ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းမှာပါတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖေါ် နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးထုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိမှုကို တော်တော်မြှင့်တင်ပေး နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကျား/မရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးအတွက်လည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တည်ရှိနေတဲ့မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊ လွှတ်တော်၊ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတ ကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိရှိရှိနဲ့ တက်ညီ၊ လက်ညီလုပ်ဆောင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် မျှော်မှန်း ထားတဲ့ အမျိုးသမီးများဘဝအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်က နေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းဦးစားပေးနယ်ပယ် ၄ ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ အချိန် ကာလအားဖြင့် ၄ နှစ်နီးပါးဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီကျန်တဲ့ကာလမှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် အ ကောင်အထည်ဖေါ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်များထည့်သွင်းတွက်ချက်တာ တွေလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သလို၊ လွှတ်တော်အနေနဲ့လည်း ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအကောင် အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့ ဘတ်ဂျက်တွေခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလှုရှင်အဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လည်း ဒီမဟာဗျုဟာစီမံကိန်းဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့ ဘတ်ဂျက်များထည့်သွင်း တွက်ချက်တာတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကို ငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအ ညီများပေးတာတွေ လုပ်ဆောင်သွားရန် အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန တွေ၊ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် (ယခင်) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင် ကိုးကားထားတဲ့အချက် ကိုမှီငြမ်းပြောကြားရမယ်ဆိုရင် —
“နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြီးပြည့်စုံသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးလူမှုဖူလှုံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ပေးသည့်အကြောင်းတရားတို့ကို ရရှိရန်အတွက် နယ်ပယ်အားလုံးတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုကို တို့မြှင့်နိုင်သလောက် တိုးမြှင့်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။” အမျိုးသမီးများအ ပေါ်နည်းမျိုးစုံဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးသဘောတူစာချုပ် – ၁၉၇၉ ခုနှစ်၏နိဒါန်း (အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းစာအုပ်တွင်ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်၊
(ယခင်) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမှာစကားတွင်ကိုးကားထားသည့်အချက်ကို ကိုးကားဖေါ်ပြပါသည်။ )
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးလူမှုဖူလှုံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည် ဆောက်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားတို့ ရရှိဖို့အတွက် နယ်ပယ်အားလုံးမှာအမျိုးသားများနဲ့တန်းတူ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုတို့မြှင့်တင်နိုင်သလောက် မြှင့်တင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်း အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျုဟာစီမံကိန်းအကြောင်းကို တစေ့တစောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျုဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) စာအုပ်
Previous: လူထုအားလုံးပါဝင်သော ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်မှု စီမံကိန်း
Next: ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ကျား/မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှု အစီအစဉ်၊ ယာချောင်းကျေးရွာ